ठग्ने फोन कलबाट होशियार! – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsठग्ने फोन कलबाट होशियार!
दार्जीलिङ, 28 मई 2017
होशियार! के तपाईंलाई पनि फोन गरेर अज्ञात मानिसहरूले व्याङ्कबाट बोलेको भन्दै एटीएमको कोड नम्बर, व्याङ्कको विवरण माग्दैछ? यदि यस्तो फोन कल आएको खण्डमा कुनै पनि स्थितिमा प्रतिक्रिया नदिने दार्जीलिङ पुलिसले दार्जीलिङका जनतालाई अपील गरेका छन्। पुलिसको यस अपीलबाट यस्ता फोन कलबाट ठगिनेहरु दार्जीलिङमा पनि धेरै रहेको प्रमाणित हुन्छ। यसैकारण पुलिसनै यस्तो फोन कलबाट जनतालाई सतर्क रहने अपील गर्न अघि आएको छ। यसबारे दार्जीलिङका टाउन डीएसपी सिद्धार्थ दोर्जीले भने-अहिले दार्जीलिङका धेरै मानिसहरुलाई फोन गरेर व्याङ्कको विवरण, एटीएम कोड माग्ने गरिएको जानकारी पाइएको छ।
यस्तो फोन गर्दा फोन गर्नेले व्याङ्कबाट म्यानेजर बोलेको बताउँदै तपाईंको एटीएम ब्लक हुनलागेको छ भनेर एटीएमको कोड नम्बर माग्ने गर्छन्। तर कुनै पनि व्याङ्कले आफ्ना ग्राहकहरूलाई एटीएमको कोड र व्याङ्क खाताके विवरण माग्दैन। यसैले यस्तो फोन गर्नेहरुलाई कसैले पनि आफ्नो व्याङ्कको नम्बर, एटीएम कोड दिनु हुँदैन।
यसरीनै उनले दार्जीलिङका धैरे मानिसहरु एसएमएसमार्फत पनि ठगिन पुगेको जानकारी गराउँदै भने-हाल विभिन्न कम्पनीको नाममा मानिसहरूको मोबाइलमा एसएमएस पनि आउँदैछ अनि उनीहरुलाई तपाईंले यति करोड़ रुपियाँ जित्नु भएको छ र तपाईको नाम, ठेगाना आदि दिनुपर्छ भनिन्दैछ। यदि यस्तो एसएमएसको प्रतिउत्तर दिए उनीहरुले सम्बन्धित मानिसलाई ठग्ने गरेका छन्। यसैले यस्ता कुनै पनि विषयमा विश्‍वास गरेर उत्तर दिनु उचित हुँदैन। जनता यस्ता कार्यहरूबाट सतर्क रहनुपर्छ। यस्तैप्रकारले धेरै मानिसहरू फेसबुकबाट पनि ठगिन पुगेको पुलिसले जानकारी गराएको छ।